Wasiiru Dowle oo joojiyay Heshiisyo ay gashay Wasaarad maanta la dhaariyey Wasiirkeedii - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wasiiiru dowlaha Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda xilgaarsiinta ayaa soo saaray qoraal uu ku baab’inayo dhammaan heshiisyadii ay Wasaarada kula jirtay shirkaddaha gaarka loo leeyahay ee ku shaqadda leh inay shaqaalaha Soomaalida shaqo ugu diraan dibadda.
Wareegtadan oo ku taariikheysan 10-ka bishan May 2021 ayey maanta faafisay warbaahinta dowladda, lamana oga in tariikhda loo bedelay. Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Cabdi Axmed Qaasim ayaa saxiixay qoraalka oo loo diray Hay’adda Socdaalka iyo jinsiyaddaha.
Wasiiru dowluhu wuxuu sheegay in dib loo bixin doono ruqsadaha uu joojiyey ama baab’iyey, iyadoo aan la shaacin shirkadaha ruqasadaha hore heystay ee laga joojiyey howhan, sababta keentay iyo qandaraasyada cusub ee la bixinayo.
Tallaabadan ayaa k soo beegantay iyadoo wasiirka cusub ee wasaaradan loo soo magaaabay xidhibaan C/wahaab Maxamed Xuseen ay maanta dhaariyeen Guddiga joogtada ah ee Golaha Shacabka.
Previous articleXOG: Maxaa ka jira inay Midowga Musharixiinta isku khilaafeen Qoraalkii lagu eedeeyay Rooble..?
Next articleHirshabeelle Jawaab celin kulul ka bixisay Qoraalkii Wasaaradda Maaliyadda Somaliya (Akhriso)